सेक्स पावर बढाउने भियग्रा चक्की ,हेर्नुहोस यसको प्रयोग कति बेला गर्दा सेक्समा बढी उत्तेजना आउछ - hamro Desh
सेक्स पावर बढाउने भियग्रा चक्की ,हेर्नुहोस यसको प्रयोग कति बेला गर्दा सेक्समा बढी उत्तेजना आउछ
दुर्बलता कम गर्ने भियग्रा भनेको कस्तो खालको औषधि हो ? यसले कसरी यौन दुर्बलता कम गर्छ ? यसको सेवनले कुनै हानि हुन्छ कि हुँदैन ?एलबी -औषधि विज्ञानका विभिन्न आविष्कारमध्ये यो पनि लोकप्रिय आविष्कारमा पर्छ । भियग्राले यौन दुर्बलताका कारण चिन्तित एवं हीनताबोधले पीडित व्यक्तिलाई पुरुषत्व फर्काउन मद्दत गर्छ ।
नेपालजस्तो खुल्लापन नआइसकेको समाजमा यौनबारे छलफल गर्न गाह्रो छ । वीर्य स्खलनको कार्य चरणबद्ध रूपमा हुन्छ । यसका लागि यौनेच्छा जाग्नुपर्यो, यौनांग उत्तेजित हुनुपर्यो । अनि मात्र उत्तेजित लिंगबाट स्खलन सम्भव हुन्छ ।
त्यसो त सामान्य पुरुषको निद्रावस्थामै पनि चारदेखि आठ पटकसम्म आफसे आफ यौनांग उत्तेजित हुन्छ । र, कहिलेकाहीँ कसैसँग संसर्ग गरेको सपनाले निद्रामा नै स्खलन पनि हुन्छ । यौनांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
यौन दुर्बलताको समाधानमा सन् १९८३ मा ठूलो उपलब्धि हात लाग्यो । यसअघि यौन दुर्बलतालाई नितान्त मानसिक समस्याका रूपमा लिइन्थ्यो। सन् १९८३ मा अमेरिकामा भएको मूत्ररोग विशेषज्ञहरूको जमघटमा डा. गिलेस विन्डलेले आफ्नै यौनांगा फेन्टोलेमाइन नामक सुई लगाई स्टेजमा आए र सबैको सामु पाइन्ट फुकालेर औषधिले पनि यौनांगलाई उत्तेजनामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरी देखाइदिए ।
फोक्सोको रक्तचाप बढेमा, उच्च लेकको रोकथाम तथा उपचारमा पनि भियग्राको प्रयोग भइरहेको छ । मधुमेह एवं उदासीबाट ग्रस्त बिरामीमा रोग वा त्यसका लागि प्रयोग गरिने औषधिका कारणले पनि उत्पन्न हुने यौन दुर्बलतालाई निराकरण गर्न यसको उपयोग भइरहेको छ ।
उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेका तथा एचआईभीको औषधि सेवन गरिरहेकाले भियग्रा खानु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा भियग्राले नकारात्मक असर बढाउँछ । मुटुको औषधि खाइरहेका, यौन सम्पर्क राखेमा हृदयाघातको जोखिममा रहेका, कडा खालको कलेजो तथा मिर्गौलाका रोगी, हालसालै मस्तिष्कघात तथा हृदयाघात भएका व्यक्तिले भियग्रा सेवन गर्नै हुँदैन |